Fisaintsainana Taorian’ny Hetsi-panoherana #8N Tao Arzantina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Novambra 2012 1:25 GMT
Mandalina ny ankehitriny sy ny hoavin'ny fireneny i Arzantina taorian'ny hetsi-panoherana mafonja manohitra ny governemanta, natao ny 8 Novambra 2012 teo.
Lohahevitra iray iraisana hita any anaty fisaintsaina maro samihafa any ny fisianà tendro mifanohitra sy ny fisamahan'ny fiarahamonina ho lasa misy mpomba ny governemanta sy mpanohitra. Sebastián Waisbrot ao amin'ny bilaoginy Catdevmind [es] manoratra hoe:
Sarotra hazavaina ny fisamantsamahana aty Arzantina. Azoko hamafisina, tsy isalasalàna, fa misy fanarahana am-bokony ara-politika tafahoatra ao, mihoatra lavitra noho izay hitako teo amin'ny fiainako. Efa somary fiarahamonina mizara roa koa izy izao: ireo vahoaka mpomba na mpanohitra ny governemanta mijoro, miaraka aminà ampahany kely eo anelanelan'izy roa ireo, na farafaharatsiny fifanakalozan-kevitra bitika kely eo anelanelan-dry zareo ireo. Ho ohatra amin'ity fanarahana am-bokony ity, dia sambany izao mba nahafantarako ny antony tsy niresahan'ny olona politika eo an-databatra fikarakarana sakafo. Mizarazara ireo vondronà mpinamana, mitsahatra tsy mihaona ny olona, fotoana mahavalalanina. Ny olona sasany tonga mihitsy amin'ny fibahanana namana ao amin'ny Facebook!
Ao amin'ny lahatsorany “Voazarazara“, malahelo mafy i Matias Gonzalo [es] amin'ny fifankahalàna misy eo anatin'ny fiarahamonina:
Ny fankahalàna olona iray izao no mibaiko antsika, ary izany no mahatonga antsika manary ny maha-olona. Tsy manao afa-tsy ny mampizarazara antsika bebe kokoa ny fanaovana zinona, ary izao isika dia tsy inona fa vahoaka adala, firenena iray mankaloiloy. Jamba sady marenina, fiantraikany ratsy avy amin'ny fanarahana am-bokony, na io fanarahana am-bokony ny ‘mandeha tsara ny zavatra rehetra‘, na fanarahana am-bokony ny ‘tsy misy na inona na inona mandeha‘.
Matias mamintina hoe:
Tena mpanao hiringiriny isika ankehitriny, gorilas [mankahala Peronists] izahay [es], peronistas [Peronists] izahay, izahay kosa K [mpomba an'i Kirchner], izahay mankahala K, 8N izahay, izahay 7D [7 Desambra, andro fidirana an-tsehatry ny lalàna vaovao momba ny fampahalalam-baovao]. Izao rehetra izao isika, afa-tsy ny hoe fiarahamonina.
Hetsi-panoherana 8N , Sary: Martin E Iglesias tao amin'ny Flickr, ampiasàna ny Creative Commons license (CC BY-NC-ND 2.0)
Ireo olon-tsotra avy amin'ny firenena hafa koa dia nandalina ity fifandonana sy fisamantsamahana ity, toy ilay Kolombiana bilaogera, Jenny Manrique [es] ao amin'ny Americas Quarterly :
Nihahenjana ny fitsitokotokoana tato anatin'ny taona roa, ary tamin'ny fomba saro-bahàna, tonga amin'ny teboka izay anaovan'ny andaniny sy ny ankilany kabary feno fankahalàna.
Nandalina ny dindon'ireo roa mpisehatra ara-politika ao anatin'ilay hetsi-panoherana #8N [es] ihany koa izy :
Ny sasany milanja sora-baventy misy teny manahirana : “Mialà Cristina”, “Ndeha mandeha any i bi…”, “Arodany ny jadona ataon'ny Argenzuela [fanafangaroana ny teny hoe Argentina sy Venezuela] “. Teny izay mitondra hafatra mazava raha toa raisinao ny hoe ity firenena ity dia nandalo jadona iray isan'ny nahalatsahan-drà be indrindra taty Amerika Latina.
Ary etsy ankilany, ny governemanta mandray ireny fitakiana ireny ho toy ny fanehoana ny “fiarovana ny tombontsoan'ireo media mpiara-dia”, izay tsy mitambatra manodidina hevitra iray matotra na tsy manaiky fa ao ambadik'izy io dia misy “tànana mpanao politika manetsika” toy ny “macrism” (avy amin'ny Mauricio Macri, Ben'ny tànanan'i Buenos Aires sady mpanohitra ngezalahy an'i Kirchner, ary ny lasitra [ara-politika] arahany dia avy amin'ny Ankavanana.)
Ao amin'ny bilaogy Cuadernos de la Ira [es], ilay Shiliana bilaogera, Jorge Muzam, manoratra hoe :
Ireo rantsana mpifanenjana dia samy gaigilahy amin'ny fanaratsiana ny ankilany. Amin'ny lafiny iray, dia misy ireo izay mandàla ny governemanta ankehitriny tarihan'i Cristina Fernández, ary amin'ny lafiny iray hafa dia ireo ambiny, izay amin'ny ankapobeny dia mpandàla fatratra ny kolontsain'ny elatra havanana
Vondrona Kirchnerist nanaraka ny Filoha Cristina Fernández de Kirchner nandritra ny fankalazàna ny Andron'ny Saina (m-pirenena). Saryo: Laura Schneider.
Tambajotra iray ampiasain'ireo Arzantina hanehoana ny fomba fijeriny ihany koa ny Twitter. Ny 9 Novambra, taorian'ny fhetsiketsehana 8N, nanoratra ny Filoha Cristina Fernández de Kirchner (@CFKArgentina) [es] hoe :
@CFKArgentina [es]: Hetsika goavana roa no nitranga tamin'ity herinandro ity : ny iray dia ny fahalanian'ny Filohan'i Etazonia indray, ilay mahery eto amin'izao tontolo izao.
Ary Ramiro Castañeda (@ramiroski_) [es] namaly hoe :
@ramiroski_: @CFKArgentina Nisy zavatra iray mbola nanan-danja lavitra, naneho herin-tsaina sy fahasahiana ny vahoaka Arzantina mba hitakiana [asa avy ] amin'ireo mpitondra tsy alehany.
Horacio Elsinger [es], ao amin'ny lahatsorany “Mitovy ihany ny zava-misy aty aorian'ny 8N?” [es], mamintina hoe :
Mbola voatazon'ny governemanta ny heriny rehetra, saingy tsy tokony hatoritory izy. Ny fomba tsara indrindra hiarovan-tena sy ho fanamafisana izay efa azo dia ny manohy mandroso amin'ny fanovàna ny firenena.